Ihu igwe na ihe nfụkasị: njirimara, mgbaàmà na mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihu igwe na allergies
Usoro mgbochi nke mmadụ nwere ike ghara ịmalite ịmalite ụmụ mmadụ ma, n'oge ụfọdụ, mepụta ihe nfụkasị ahụ. Ihe kachasị dị mma bụ na nfụkasị na-ebute sneezing na-aga n'ihu ma na-asọ oyi, mkpọchi imi na imi na-agba ọsọ mgbe niile, n'etiti mmetụta ndị ọzọ. Na ihu igwe na allergies ha metụtara n’ime ọtụtụ mmadụ. O nwekwara ndị nwere nsogbu n ’mgbanwe ihu igwe.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmeghachi omume kachasị na ihu igwe na nfụkasị ahụ.
1 Ihu igwe na allergies
2 Ihe kpatara ihu igwe na nfụkasị ahụ
3 Mgbanwe ihu igwe metụtara
4 Mmetụta ikuku
N'ime ụdị ndị a, mmeghachi omume nfụkasị ndị a na-ahụkarị na-abụkarị rhinitis, nhụjuanya nhụjuanya na ụfọdụ mgbaàmà dịka dermatitis ma ọ bụ ọnọdụ siri ike karị. Mgbe anyị na-ekwu maka rhinitis, anyị na-ekwu maka snee na-aga n'ihu na-emetụtakarị anyị mgbe anyị kachasị ekpughere, imi imi nke na-adịghị ekwe ka anyị na-eku ume nke ọma na mmiri na-aga n'ihu mgbe niile. Rhinitis bụ otu n'ime ihe mgbaàmà kachasị mma nke ịrịa ọrịa na-agafe. Ha bụ ihe mgbaàmà na-ewe iwe nke na, mgbe ụfọdụ, anaghị ekwe ka anyị bie ndụ dị mma. Being na-esi nri mgbe niile, ịkwa ụra na ịfụ imi gị adịghị atọ ụtọ ma ọlị.
Ihe mgbaàmà ọzọ nke ihu igwe na ihe nfụkasị bụ conjunctivitis. Ha na-enwekarị ihe mgbaàmà dịka anya na-agba agba na iwe. Enwere ndị anya ha na-acha ọbara ọbara dị omimi. Na dermatitis, eczema na akpụkpọ na hives nwere ike kpatara. N'ikpeazụ, ụfọdụ ọnọdụ ihu igwe na ihe nfụkasị ahụ nwere ike ịdị njọ karịa ma wakpo usoro nri na akụkụ iku ume dị ka ụkwara ume ọkụ.
Ihe kpatara ihu igwe na nfụkasị ahụ
Inwe ihe nfụkasị ahụ maka mgbanwe ihu igwe sitere na mkpụrụ ndụ ihe nketa na gburugburu anyị gbara anyị gburugburu. Anyị niile nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa iji taa ahụhụ ma ọ bụ na ọ bụghị site na nfụkasị na ụdị allergens dị iche iche. Ismsfọdụ ihe dị ndụ nwere ike ijikọta n’ụzọ ọ ga - eme ka usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ site na mmeghachi omume na-ekwubiga okwu ókè na nke na-adịghị mma maka ụfọdụ ihe mkpali ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke a na-akpọ allergens. Mgbe onye ọrịa na-ekpughere ndị ọrụ a, ha nọ n'ọnọdụ nke ịba ụba nke usoro ihe omimi na ihe ndị dị ndụ na-emepụta mmeghachi omume n'ụzọ dịgasị iche iche dị ka onye ọ bụla.
Ihe mgbaàmà kachasị amara bụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, mana ike ha na ugboro ole ga-adabere n'ụdị onye ọ bụla na ogo nke ikpughe na allergen. Allergens bụ ndị ọrụ na-ahụ maka nfụkasị ahụ. Ndị a nwere ike ịbụ: nri, ọgwụ, ihe ikuku dị ka pollen, kemikal, fungi, ebu, àjà na anụ ọhịa, wdg. Mgbe ndị a allergens abata na kọntaktị, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-amata ha dị ka ihe ndị dị egwu ma na-agbachitere onwe ya na mbuso agha, nke bụ nzaghachi nke yiri ka anyị edepụtara n'elu.
Ifufe bụ ọrụ maka ịgbasa pollen nke osisi iji gbasaa mpaghara nke nkesa nke osisi. Ọ bụ ya mere mgbanwe ihu igwe nwere ike ịkpata nfụkasị. Ma ọ bụ na mgbe anyị gbanwere oge, otu a ka ifufe, ike ha na ụzọ ha e wezụga na osisi na-amalite ha okooko ogbo. Nke a bụ ogbo okooko ebe ha na-emepụta pollen ka ha nwee ike gbasaa na mpaghara ahụ.
Mgbanwe ihu igwe metụtara
Ugbu a anyị matara na ọ bụ ndị na-asọ oyi ka ọ kpatara anyị inwe mgbaàmà nke nfụkasị ahụ, ka anyị hụ ihe ihu igwe na ihe nfụkasị ga-eme ya. Anyi aghaghi ighota na ngbanwe nke ihu igwe n’onwe ya adighi. Ọ bụghị na anyị ga-ewepụta mgbaàmà tupu mgbanwe nke ụfọdụ mgbanwe ihu igwe na-akọwa gburugburu ma ọ bụ gburugburu mmadụ n'otu oge ụfọdụ. Nke a abụghị n'onwe ya ihe nfụkasị ahụ. N'ọtụtụ oge, mgbanwe nke ihu igwe bụ ihe na-akpata mmụba nke ịta ahụhụ nke ụfọdụ ndị na-arịa ọrịa na ikuku, nke bụ ihe na-eme ka mmeghachi omume nke mucosa na ndị na-arịa ọrịa nfụkasị.
Anyị ga-enyocha nke bụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke metụtara ọtụtụ mgbaàmà ndị a. Mgbanwe mberede na ọnọdụ ikuku na iru mmiri na -emepụta ụfọdụ mgbaàmà na ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ. Ma nke a bụ n'ihi na mucosa na-emeghachi omume na nke a. Mgbanwe nke ọnọdụ ikuku na iru mmiri nwere ike ibute mbufụt. N'aka nke ozo, okpomoku di ala na emeputa nhoputa na nhoputa na nchi. Nke a pụtara na nke ha ha ga-agbanye mgbidi ha ma belata usoro nchekwa site na ikuku. Mgbanwe ndị a na-ebute ọrịa nje virus.
Ọ bụrụ na anyị agaa n’ụzọ ọzọ, anyị ga-ahụ na oge opupu ihe ubi na-atụ anya mbata ya, ebe ọ bụ na enwere ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na ụfọdụ Osisi na-amị mkpụrụ na Spain pulitere ihe dị ka ụbọchị 20 tupu afọ 50 gara aga. Nke a gbanwere mmepe nke osisi na ogologo pollination oge. Buru n'uche na ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu, ọtụtụ ndị na-anabata pollen ga-ekpughere nsogbu a ogologo oge kwa afọ.
Oge ahụ bụ ihe ọzọ dị mkpa gbasara ihu igwe gbasara ihu igwe ka ọ bụrụ akaụntụ. Ọ bụ maka ịchịkọta ụdị fungal na pollen n’ikuku. N'ụbọchị mgbe oke ikuku mmiri, ọ gaghị adị mma ịpụ n'èzí maka ndị niile nwere ihe nfụkasị ahụ. Mgbasa na ntinye nke allergens na-adabere na ngwakọta nke ikuku na-eme. Dabere na ntụzịaka ya na ọsọ ya, enwere ike ịme ngụkọta akụrụngwa nwere ike ịmụba yana ogo ikuku iji mụọ amụma amụma maka uru nke ndị na-arịa nfụkasị ahụ.
N'ihi nke ahụ, Taa, anyị nwere data na-egosi anyị ọnụọgụ ntụ dị n'ikuku na-adị kwa ụbọchị ịmara ma ọ bụrụ na anyị ga-apụ dị ka ịkpachara anya ma ọ bụ ka mma ịnọ n'ụlọ iji zere mmeghachi omume na mucosa.
Ihu igwe na ihe nfụkasị jikwara ime ya oke iru mmiri, mmiri ozuzo na ntu oyi na gburugburu ebe obibi. Ma ọ bụ na usoro ihu igwe ndị a na-ebute nzacha ma ọ bụ ịdị ọcha nke gburugburu ebe obibi. Nke a pụtara na ụmụ irighiri mmiri na-ejide mkpụrụ osisi pollen na, ka ọ dị arọ karị, ha dara n'ala ma nọrọ na-echekwa. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ndị na-arịa ọrịa nfụkasị na mmiri na-eme ka mgbaàmà ha ka njọ na ụbọchị anwụ na anwụ, mgbe ha na-akawanye mma na ụbọchị mmiri ozuzo.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmekọrịta dị n'etiti ihu igwe na ihe nfụkasị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihu igwe na allergies